khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal निषेधाज्ञामा राजनीतिक सयर र अन्धकार कोठामा जनता:कसरी हुन्छ चेनब्रेक ? – khabarmuluk.com
निषेधाज्ञामा राजनीतिक सयर र अन्धकार कोठामा जनता:कसरी हुन्छ चेनब्रेक ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेयता राजनीतिक सरगर्मी झन् बढ्दै गएको छ । संसद विघटन गरेपछि त नेताहरुको दौडधूप थप तीब्र बनेको छ ।
महामारीले देश आक्रान्त भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि देशका ७५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सर्वसाधारणको आवागमन मात्र ठप्प पारिएको छैन, दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खानेहरुलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजाने साधन नहुँदा बाटाघाटामै छट्पटिएर सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
अत्यन्त जरुरी पर्दा समेत नागरिकले घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था भए पनि नेताहरुलाई राजधानी घुम्न छूट दिइएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका घरमा हरेक दिन भेला र बैठक गरिएका छन् । कहिले आफ्नै दलका त कहिले अरु दलका नेता बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भेला हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, एमालेबाट निकालिएका माधव नेपालले पनि नेताहरुका भेला र बैठकका लागि अड्डा नै खडा गरेका छन् । उनीहरुका ती भेला र बैठकमा कहिल्यै पनि जनताले पाएको सास्ती र महामारीले दिएको वेदनाले ठाउँ पाएको छैन । उनीहरुको एक मात्र चिन्ता ओलीलाई कसरी शक्तिबाट च्युत गरी आफू स्थापित हुने भन्ने रहेको छ । महामारी नियन्त्रणमा सघाउने र भोका पेटहरुलाई एक छाक टार्नका लागि मद्दत गर्ने यिनीहरुको कहिल्यै बन्न सकेन छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गरी जनतालाई साँच्चै राहत दिने हो भने सरकारले सबभन्दा पहिला नेताहरुका अनावश्यक हिँडडुल र दौडधूप रोक्नुपर्ने देखिन्छ । अँध्यारा कोठामा षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नेबाहेक अरु केही नगर्ने नेताहरुका गतिविधि सीमित नगरेसम्म महामारी नियन्त्रणमा नआउने र जनताले राहत पनि नपाउने देखिन्छ ।
नेताहरुका दौडधूपले एकातिर निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आवागमन रोकिएको छैन । जबकि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि केही साता शतप्रतिशत आवागमन ठप्प पारिनै पर्छ । र, यो समयलाई परीक्षण विस्तार गर्ने, अस्पतालको चाप घटाउने र पूर्वाधार तथा जनशक्ति बढाउनेमा उपयोग गर्नुपर्छ । खोप अभियान पनि तीब्र पार्न सके महामारीको यो लहर मात्र होइन, अर्को लहरबाट पनि जनतालाई जोगाउन सकिन्छ ।
तर, यस्तो आपतको घडीमा पनि सत्ताको खेल खेल्ने र कुर्सी खोसाखोस गर्ने विपक्षी नेताहरुको रवैयाले सरकार महामारी नियन्त्रणमा पूर्णतः केन्द्रित हुन सकेको छैन । नेताहरुका अनावश्यक दौडधूपले सरकारी संयन्त्रलाई काम गर्न झनै बाधा पुगिरहेको छ ।
एक त राजनीतिक विषयको झगडालाई अदालतमा बुझाइसकिएको छ । अदालतले पनि तत्कालै ग्रहण गरी सुनुवाइको प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेताहरुका भेला, बैठक र दौडधूपको कुनै अर्थ छैन । विपक्षी गठबन्धनको नेताका हैसियतले कांग्रेसले अब के स्पष्ट हुनुपर्छ भने उसले अदालतलाई दबाब दिएर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने हो कि विचाराधीन विषयमा अदालतलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने रु कांग्रेस पनि प्रचण्डपथमा लागेर बाहुबली चरित्र प्रदर्शन गर्न सुहाउँछ रु उसको आफ्नै आदर्श र विगतका व्यवहार एवं अडानले के भन्छन् रु आफ्नै व्यवहारका बीचमा संगति मिल्छ कि मिल्दैन रु एकपटक एैनामा आफूलाई हेरे हुन्छ ।
सरकार र खासगरी प्रशासन संयन्त्रले पनि नेता र सर्वसाधारण जनताप्रति गर्ने व्यवहारमा भिन्नता हुनुहुँदैन । निकै कठोर र निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । जनताको जिउ जोगाउनेजस्तो गम्भीर र संवेदनशील सवालमा सरकारका काममा बाधा व्यवधान खडा गर्ने विपक्षी नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्न समेत पछि पर्नुहुँदैन ।
परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये ५ प्रतिशत मात्र पोजिटिभ देखिए पनि महामारी भयानक र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको मानिन्छ । उच्च सतर्कता र व्यापक प्रतिबन्धका नियम लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा अहिले पनि ३५ देखि ४५ प्रतिशतको हारामारी संक्रमणदर रहेको छ । अर्थात् बाटामा दुईदेखि तीनजनालाई समातेर पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने कम्तीमा एकजना संक्रमित भेटिने अवस्था छ । यहीकारण मृत्युदर घट्न सकेको छैन । आईसीयु र भेन्टिलेटरमा अझै थेगिनसक्नु चाप छ । त्यसकारण अब स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर भए पनि सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसको पहिलो सर्त हो, नेताहरुका राजनीतिक शयरमा पूर्णबिराम ।